चीन बियर टोकरा मोल्ड निर्माण र कारखाना | Aojie मोल्ड
आपूर्ति बियर टोकरा मोल्ड सामाग्री: पीपी/पीई आकार # OEM/ODM सेवा # प्याकिंग विवरण: काठ बक्स ढुवानी पोर्ट: गुआंगज़ौ
किनकि बियर टोकरा को संरचना अधिक जटिल छ, हामी beryllium तामा सम्मिलित चिसो समय छोटो र संरचना खींच इंजेक्शन को समयमा प्रयोग गरीन्छ। चूंकि बियर बक्स कस्मेटिक भाग हो, बियर टोकरा प्लास्टिक भागहरु को विरूपण एक सुविधाजनक मोल्ड विधानसभा प्राप्त गर्न को लागी सानो हुन आवश्यक छ। प्लास्टिक को भाग को सतह मा कुनै गेट्स वा इजेक्शन पिन ट्रेल हुनु पर्छ।
बियर टोकरा मोल्ड पर्खालहरु कोर तान्ने र चार पक्ष मा हा भौंकने संरचना को उपयोग को आवश्यकता छ। उत्पादन मा, कहिलेकाहीँ हज वेज धेरै तंग छ, साथै बियर टोकरा अवर्गीकृत भाग लाइन मा रहन्छ र demoulding को लागी मुश्किल छ। यो समस्या को हल गर्न को लागी, हामी खींच हुक एकै समयमा बाहिर सार्ने संग हा हार्किंग बनायो।
आइटम को नाम: बियर टोकरा मोल्ड
OEM/ODM सेवा #
नेतृत्व समय: 25-55days जम्मा पछि
प्याकिंग विवरण: काठ बक्स
भुक्तानी र ढुवानी सर्तहरु भुक्तानी सर्तहरु: टी/टी (30% निक्षेप, शिपमेंट अघि 70%)
शिपिंग पोर्ट: गुआंगज़ौ
अघिल्लो: अटो अन्य पार्ट्स मोल्ड
अर्को: कृषि टोकरी मोल्ड
प्रश्न: तपाइँ के सेवाहरु प्रदान गर्नुहुन्छ?
एक: हामी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डहरु निर्माण र नमूना र थोक production.We को लागी प्लास्टिक इंजेक्शन भागहरु उत्पादन मोल्ड डिजाइन सेवाहरु प्रदान।
Q: म तपाइँलाई कसरी सम्पर्क गर्न सक्छु?
A: तपाइँ हामीलाई ईमेल, WhatsApp, स्काइप वा Wechat को माध्यम बाट एक जांच पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई २४ घण्टा भित्र जवाफ दिनेछौं।
प्रश्न: म कसरी एक उद्धरण प्राप्त गर्न सक्छु?
A: तपाइँको RFQ प्राप्त गरे पछि, हामी तपाइँलाई २ घण्टा भित्र जवाफ दिनेछौं। तपाइँको RFQ मा, कृपया हामीलाई तपाइँ को आवश्यकताहरु को आधार मा प्रतिस्पर्धी मूल्य पठाउन को लागी निम्न जानकारी र डाटा प्रदान गर्नुहोस्। a) PDF वा JPG ढाँचामा २ डी पार्ट ड्रिings्ग र यूजी, प्रो/ई, SOLIDWORKS, CATIA, CAD, STP, X_T, IGS, PRT, DWG, वा DXFb) राल जानकारी (डाटाशीट) ग) भागहरु को लागी वार्षिक मात्रा आवश्यकता
प्रश्न: यदि हामीसँग भाग कोर्ने छैन भने के गर्ने?
A: तपाइँ हामीलाई तपाइँको प्लास्टिक भाग नमूनाहरु वा आयाम संग फोटो पठाउन सक्नुहुन्छ र हामी तपाइँलाई हाम्रो प्राविधिक समाधान प्रदान गर्न सक्दछौं। हामी सिर्जना गर्नेछौं।
Q: के हामी सामूहिक उत्पादन भन्दा पहिले केहि नमूनाहरु प्राप्त गर्न सक्छौं?
A: हो, हामी तपाईंलाई सामूहिक उत्पादन शुरू गर्नु अघि पुष्टि को लागी नमूनाहरु पठाउनेछौं।
Q: चीन र विदेश संग समय फरक को कारण, म कसरी मेरो अर्डर प्रगति को बारे मा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छु?
A: हरेक हप्ता हामी डिजिटल चित्रहरु र भिडियोहरु संग उत्पादन प्रगति देखाउँछ संग साप्ताहिक उत्पादन प्रगति रिपोर्ट पठाउनुहोस्।
प्रश्न: तपाइँको लीडटाइम के हो?
A: मोल्ड उत्पादन को लागी हाम्रो मानक लीडटाइम4हप्ता हो। प्लास्टिक को भागहरु को लागी मात्रा मा निर्भर गर्दछ 15-20 दिन हो।
Q: तपाइँको भुक्तानी अवधि के हो?
A: ५०% भुक्तानी जम्मा को रूप मा, ५०% ब्यालेन्स शिपिंग भन्दा पहिले भुक्तान गरिनेछ। सानो रकम को लागी, हामी पेपैल स्वीकार गर्छौं, पेपैल आयोग आदेश मा थपिनेछ। ठूलो रकम को लागी, T/T लाई प्राथमिकता दिईन्छ
प्रश्न: म कसरी हाम्रो गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न सक्छु?
A: मोल्ड बनाउने समयमा, हामी सामग्री र भाग निरीक्षण गर्छौं। भाग उत्पादन को समयमा, हामी १००% पूर्ण गुणस्तरीय निरीक्षण गर्छौं
प्याकेजि before्ग भन्दा पहिले र प्रत्येक भागहरु लाई अस्वीकार गर्नुहोस् कि हाम्रो गुणस्तर मानक वा हाम्रो ग्राहक द्वारा अनुमोदित गुणवत्ता अनुसार छैन।
प्लास्टिक बियर टोकरा मोल्ड
प्लास्टिक ठूलो टोकरा मोल्ड
प्लास्टिक बोतल टोकरा मोल्ड
प्लास्टिक रोटी टोकरी मोल्डिंग
प्लास्टिक टोकरी मोल्ड
प्लास्टिक तह टोकरा मोल्ड
प्लास्टिक इंजेक्शन टोकरा मोल्ड
प्लास्टिक तरकारी टोकरा मोल्ड